I-Semalt: Ama-plugin we-WordPress we-Site Maintenance
Ukuqalisa emakethe ye-WordPress ye-plugin ingenye yezinselelo ezinzima kakhulu kubathuthukisi. Ukuthola iphuzu lokungena ngokuqinisekile kunzima, kodwa ungazigcina kude nomncintiswano namanye amathiphu alula. Into ebaluleke kunazo zonke okudingeka uyenze ukuthuthukisa ukuqonda ukuthi yiziphi ama-plugin ayenayo futhi azuzisa isayithi lakho. I-plugin enhle kakhulu ibonisa abasebenzisi nabathuthukisi ukuthi ulondoloza isayithi lakho nsuku zonke futhi kusiza ukuthuthukisa ukusebenza komsebenzi jikelele.
Uma udidekile ngokuthi yiziphi i-plugin ye-WordPress okufanele uhambe nayo, bheka i-Ross Barber, isazi esiphakeme se- Semalt , sinolwazi oluthakazelisayo lwe-plugin ayisithupha ebalulekile yokugcinwa kwesayithi.
1. I-Antispam Bee
Njenge-webmaster noma i-blogger, uyazi ukuthi inani lamazwana ogaxekile liyanda kwi-intanethi futhi ayikho indlela efanele yokukhipha amazwana ogaxekile. Ngenhlanhla, sinesi-plugin ye-Antispam Bee, engqondweni futhi evelele. Le plugin yamahhala ithatha amazwana ogaxekile futhi ithembekile ngamakhulu kuya ezinkulungwaneni zabasebenzisi ku-intanethi. Kuhle kokubili ukusetshenziswa kokuhweba nokuyimfihlo futhi akudingi kakhulu. Uma ungenayo ukufinyelela ku-Akismet ngenxa yezizathu ezingalindelekile, le plugin ikufanele.
Le plugin ye-WordPress ingenye yezindlela zokulungisa isayithi lakho. I-Jetpack ayidume kakhulu njengamanye ama-plugin, kodwa kuyinto enhle. Lokhu kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kwesayithi lakho..I-Jetpack inqwaba izici eziwusizo nezithakazelisayo ongazithembela kuzo. Amaphuzu avelele ahlanganisa imibiko yokuhlaziya yesikhathi sangempela, ukulethwa kokuqukethwe, usizo ekukhetheni izithombe nezindikimba ezithwala kalula.
Uma uphazamiseka ngenxa yejubane eliphansi lesayithi lakho futhi ungenayo amafayela okusekelayo, kufanele uzame Duplicator. Yilinye lama-plugin we-WordPress angcono kakhulu futhi angathembeki kakhulu ekusizeni isayithi. I-Duplicator ikuvumela ukuba wenze amafayela wokusekelayo ezimweni eziphuthumayo futhi ikuvumela ukuhambisa idatha kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye ngaphandle kwenkinga. Udinga nje ukufaka le plugin futhi wenze umsebenzi wakho ube lula futhi ngokushesha kunanini ngaphambili.
4. Isihloko Hlola
I-Theme Check ikusiza ukuba uhlole ukuthi ngabe isihloko sendawo yakho sisesikhathini futhi njengamazinga we-WordPress noma cha. Ngempela i-plugin esetshenziswe ngabasebenzisi be-wordpress.org futhi isiza ukuhlola isihloko sakho sokuthumela izikhombisi futhi igcina amafayela amaningi okulondoloza esikhundleni sakho.
5. I-Easy Updates Manager
Ukubuyekeza isayithi lakho le-WordPress ngaphandle kwe-plugin kungaba yingozi uma usebenza amawebhusayithi ahlukene ngesikhathi esifanayo. Ngomphathi we-Easy Updates, manje kulula ukulawula amasayithi amaningi, themes, okuqukethwe, kanye nama-plugin ngesikhathi esifanayo. Ingxenye engcono kakhulu yokuthi le plugin kulula futhi elula ukuyisebenzisa futhi ingalandwa kusuka ku-intanethi. Uma usufakiwe, ungasebenzisa le plugin ukudala amafayela amaningi okulondoloza futhi ungalawula amawebhusayithi akho ahlukene noma ibhulogi ngesikhathi esifanayo.
6. I-Yoast SEO
I-Yoast SEO ingenye yama-plugin we-WordPress angcono kakhulu futhi asetshenziswa kakhulu. Inokuningi kwezici futhi isetshenziswe cishe wonke ama-webmaster noma i-blogger. Izici zayo eziyinhloko zihlanganisa ukuthuthukiswa kwekhasi le-XML, okwengeza izihloko ze-SEO, izincazelo, kanye nezinkinobho kwisayithi lakho.